Ugu danbayb Alex Oxlade-Chamberlain,oo heshiis lagaaray Liverpool | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Ugu danbayb Alex Oxlade-Chamberlain,oo heshiis lagaaray Liverpool
(31-8-2017) Cayaaryaahnka kooxda kubada Cagta Arsenal ee Alex Oxlade-Chamberlain,ayaa lasheegayaa in uu ugu danbayn heshiis rasmi ah lagaaray Kooxda Liverpool kadib markii uu diidey in uu u Wareego Naadiga Chelsea oo si dhaw loola Xiriiriyey.
Alex Oxlade-Chamberlain,ayaa Liverpool ku qaadan doontaa aduun lacageed Gaaraya £40 million Lacagtaas oo ay aqbashay kooxdiisa Arsenal waxaana lafilayaa in Saacadaha soo socda uu kubiiri doono Naadigaas.
Kooxda Liverpool ayaa sidoo kale inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga lala Xiriirinayaan in ay soo qaadan doonaan Xayaartoyda kala ah Thomas Lemar iyo Virgil Van Dijk. kuwaas oo ay lacag aad u badan kula soo wareegi doonaan hadii ay aqbalaad kahelaan kooxahooda.
Oxlade-Chamberlain ayaa Xiligii lasoo dhaafay 40 kulan u saftay Arsenal isaga oo u dhaliyey 6 Gool waxaase uu boos joogta ah kawaayey shaxda Macalin Arsene Wenger sidaa daraadeed ayuuna uga tegayaa Naadigaas.